Nyaya yangi yekutanga - Varient - News Magazine
Nyaya yangi yekutanga
egrace Jun 15, 2019 0 22
Sarudza format ye post yako
Isa chinyorwa chine mavhidhiyo.
Uploadha vhidhiyo kana embed vhidhiyo kubva kuYoutube kana Vimeo.
Uploadha mumhanzi yako wobva wagadzira playlist yako.
egrace Jun 15, 2019 22 0
GOT TO LOSE TO WIN TO AGAIN.
RPM SHONA BOOKS AND SERIES.
"Ini handina kunzwisisa, chamavadzingira ini, except kuti munhu azongouya kunge arikupinda mumba mavo chete" Mai Glenda vakadaro, "Izvozvo zvacho, ndizvo zvandamutandanisira, izvozvo. Munhu wawakapedzisira kuona kudhara, munhu waakashainira, munhu wosvika panapa uchiita kunge urikupinda mubako, hanzi I know he's my son. Kutaura ikoko here tete?. Paauya ndatoti munhu kwaye ini. Ko kungotaura nevanhu zvakanaka? Varume vakadai vanoda kuonererwa." Mai Tanaka vakadaro, "Iye akazenge amuudza kuti kune mwana ndiani? News travels fast handiti? Akazvinzwa kupi?" Mai Tanaka vakabvunza, "Ah, ndakasangana nefriend yake kuFife avenue nezuro. Akangobvunza kuti mwana wako here, ndikati ehe. I'm sure he just assumed kuti ndewa Garikai because Tino looks more like him." Mai Tanaka vakaridza tsamwa, "Ini dinga riye handidi kuriona pano hangu. Ndinomuita zvimwe." Mai Tanaka vakaenderera, "Haaa, Mai Tanaka haikona kutaura zvinhu zvakadaro muroora." Mai Glenda vakadaro vachirova rova mai Tanaka "Aiwa tete, ndibvunzei ini ndinoziva nyaya yacho yese. Mwana akarwara nestress pano uyu? Aitwa nekuiswa pablacklist pese. Kuenda kwaakazoita kuAustralia maronda anga atiporei uyu. Kwaingova kuchema nakuchema, everyday. Nhasi munhu wouya uchibhidhaira kunge pamba pako, ko kuzozvida kani? Nxaaa." Mai Tanaka vakaridza tsamwa, "ngaaende anoita mwana naJoyce wake uko, potse potse akatohurirwa futi." Mai Tanaka vakaenderera, Glenda akangoramba akanyarara, "Asika mwana ndewakewo. Mwana haana chaakapara kaa? Ende hapana chaanoziva, ehe grudge ngariitike pauhuwiri hwake naGlenda, kwete kupinzira mwana, paasingakwane. Hongu ibenzi hake, asi anokodzera kuona mwana wakewo." Mai Glenda vakadaro kubva mai Tanaka vatarisa mudenga nesvoto, "Mwana arikukura uyu four years? The more they grow the curious and Inquisitive they become. Its question, after question, iwe uchingovhara chete. Anosvika pastage yekuti unozotadza kumucontroler wakuudzwa magara moyo. Ini pandakaenda kuChegutu newe kunoona baba vako, unoti ndaida kuvaona ini? Zvaitondibhowa but grudge rangu navo is not supposed to extend to you." Glenda akatarisa Tino, "Ko kana achida custody yemwana?" Glenda akabvunza, "Haa zvecustody tinozozviona izvi." Mai Glenda vakaenderera, "Eish I hate that guy with a passion, I just can't stand the sight of him. Hamenoo tichaonawo, kana akasadzoka, hamenowo hakewo, handimbofi ndakamunyengerera. Kana mwana akabvunza ndongommudzawo chokwadi, zvinombonetsa here?" Mai Glenda vakadzungudza, "Hauone kuti unenge wakudzidzisawo mwana kuvenga here?" Glenda akadzungudza, "Ko chokwadi, chakaipei hacho?" Glenda akabva abuda mumba, "Do you think that's a good idea?" Mai Tanaka vakabvunza, "Hameno, but I know its the right thing to do. Kana baba vacho vakasarudzawo, kusada mwana wavo, it's not our concern, we don't want anything from him." Mai Glenda vakadaro, "In two weeks time tinenge takudzokera, I hope vachagadzirisa nyaya dzavo in time." Vakaenderera mberi havo. Mai Tanaka vakamboramba vakatarisa mhepo, kubva vasimuka, "Regai ndiite zvekubika ini tete." Mai Tanaka vakabva vabudawo.
"So this is the last attempt?" Kuda akabvunza Garikai, "I don't know shaa, Glenda akandivenga ndabvuma hangu. I can't even forget the look in her face when she saw me." Garikai akadaro, "I don't blame her hangu. After everything? Remember how you treated her last time? Hanzi chinokanganwa idemo kuti ndakambocheka muti uyu, muti watemwa haunganwe, nekuti vanga repakatemwa rinogara richioneka everyday. Imagine kurambwa nemunhu, pamusoro pacho wobva waita nhumbu, kuwedzera ronda pamusoro perimwe. Mwana iyeye ndiye anoita kuti Glenda asakanganwe zvese, zvakaitika." Kuda akadaro, "But! Kudzokera kuside uku maone, baba vaya vaidaidzwa paye, this time ndivo vanenge vakuti vhurira gate." Kuda akadaro, "So what's the plan?" Garikai akabvunza, "Honestly, I don't have a plan, dai ndakaziva pandakasangana naye, ndakamukumbira number dzake, zvaiitawo nani." Kuda akadaro, "Then we don't have any other option, we just have to man up." Kuda akadzungudza musoro, "Apa mudhara apa maakudzokera mega apa, how do you know, zvimwe vanhu vakabva vasara vachitenga imbwa?" Kuda akabvunza, "Iwe kutya kwako, hakusi kwemurume iwe. We don't have a choice, hatina number dzake. She blocked me on Facebook. Old WhatsApp number yake haichashandi. So we have to go back, munhu asati aronga zvekudzokera kuAustralia." Garikai akadaro, "Enda wega hako. This time you are not going to drag me in this mess again. After all, you are the one who screwed up." Kuda akadzvuta doro rake hake, "Haa zvedoro zvakwana unotozo tadza kudzokera kumba kwako zvakanaka. Chibva pano." Garikai akadaro achibvuta bhodhoro raKuda, "Aizvee, ko urikundi dzingirei?" Kuda akadaro, "Zvakwana, unozotiitira zvimwe muroad umu." Garikai akadaro achivhura door, "Aiwa ndinorara pano." Kuda akabva arara pasofa, "urikuda kundidzinga because ndaramba kuenda newe? Ndezvako izvo. Ndirikuzorara pano uchida usingade." Gari akazongoona kuti panga pasina yekutamba kubva abuda.
Mangwana acho Garikai akadzokera kuDzivarasekwa, akasviko parker pagate, akanogogodza gate, kubva ravhurwa ipapo ipapo, Garikai akavhunduka achiona gate ravhurwa naSekuru vaGlenda, "Makadii henyu?" Akavakwazisa, kubva baba Tanaka vambomupima nemaziso kwakuzo pindura, "Tinofara hedu, tingakubatsirai nechii?" Garikai akambokwenya musoro, zvine kakutyira mukati, "Ndokumbirawo kuonawo Glenda." Baba Tanaka vakapima Garikai nemaziso futi, "Ndiwe ani?" Vakabvunza, "Umm, ndinonzi Garikai." Baba Tanaka vakagitsurira musoro, "Muri ani wake?" Vakabvunza, "Haa, it's complicated." Akapindura, "Complicated how?" Garikai akashaya zvekupindura, "Wakambouya pano here?" Garikai akagutsurira musoro, "Hoo, ndiwe baba vaTino?" Garikai akagutsurira musoro, "You are a very arrogant man, for sure. Ndinokubvunza kuti who are you to Glenda, woti its complicated, in other words you were trying to say its non of my business. Yet uripamba pangu, uchida kuona muzukuru wangu, woda kundigwajura pano. Saka wakadzingwa, now I understand." Baba Tanaka vakataura vachitaridza kubhoikana naye chaizvo, "Sorry henyu." Garikai akataurira pasi pasi, "I hope your relationship will remain like that forever, you don't deserve Glenda, you don't deserve her at all. Anyway ndakunyara rega ndimudaidze, ukapinda muno unoitwa kanyama kanyama nevakadzi vepano. So let's maintain peace." Vakadaro, "Tanaka!! Tanaka! Deidza Glenda auye pano." Vakadeedzera, "Anouya manje manje." Vakadaro vachidzokera havo kunogeza mota yavo." Pasina nguva Glenda akabva abuda, "Hi Glenda, I'm sorry about last time, I didn't mean to scare you." Glenda akaramba akanyarara achibuda panze pegate, "Hoo? Kwakanaka here?" Glenda akabvunza, "We need to talk." Gari akada kubata Glenda ruoko, kubva Glenda adzokera kumashure achidzungudza musoro, "maintain your distance. Right chitaura hako zvawanga uchida kutaura." Garikai akagutsurira, "I'm sorry about everything." Glenda akagutsurira musoro, "And?" Glenda akabvunza, "I came here to talk about Tino." Glenda akagutsurira musoro, "Umm, izvozvi ndirikuda kubuda, unouya mangwana." Glenda akadaro achikwenya mukati memaoko, "Or tinosangana mutown, or kuWestgate or paLong Cheng what do you think?" Garikai akabvunza, "That's all right." Glenda akapindura, "Ndokumbirawo kaa number dzako dzekuno, nedze KuAustralia." Glenda akamupa, "Horaiti thanks ndinokufonera. Will call kana ndabva kubasa" Glenda akapindurudza maziso, "Whatever you do, I only got two weeks left here in Zimbabwe." Garikai akagutsurira musoro, "Okay thanks." Glenda haana kupindura, akatendeuka achidzokera mugate, "Oh! by the way we are not friends, note that." kubva avhara gate..
egrace Jun 15, 2019 0 2